Roobow oo laga hor istaagay tartanka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed. – Hornafrik Media Network
Roobow oo laga hor istaagay tartanka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed.
HornAfrik-Mukhtaar Roobow Cali Abuu mansuur oo horey uga soo mid noqday saraakiisha ugu sareysa Al-shabaab sanadkii hoirena soo maray dhnaka Dowladda Soomaliya kadib sanado uu dagaal kula jiray Al-shabaab uuna go’doon ku ahaa qeyb kamid ah gobolka Bakool ayaa laga hor istaagay inuu kamid noqdo dadka tartanka u gali kara qabaashada xilka madaxtinimo e Koonfur Galbeed.
Roobow oo shalay gaaray baydhabo aya halkasi kga dhawaqay inuu yhay musharax u taagan ku fariisiga kursiga madaxwyene ee Koonfur
“Wasaarada Amniga Gudaha Dowlada Federaalku Iyadoo ka duulaysa xilka iyo waajibaadka dastuurka ku meel gaarka ah u igmaday gaar ahaan La-socodka xaaladaha amni ee wadanka iyo Dabagalka heshiisyadii horey loola galay hay’adaha caalamka kuna salaysan iskaashiga iyo wadashaqaynta amniga guud ee dalka, deriska iyo caalamkaba.”ayaa lagu yiri
Hadaba, Wasaarada Amniga Guduhu iyadoo gudanaysa waajibaadkeedaka fulainaysana go’aanki madaxwaynaha Dowlada Federaalka Soomaliya cafiska ugu fidiyey dhamaan horjoogayaasha iyo xubnaha ka tirsan ururada argagixisada ah ee ku sugan wadanka gudahiisa, waxay dadaal dheer u gashay sidi looga miro dhalin lahaa cafiska Madaxwaynahu ku dhawaaqay. Ayaa qoraalka lagu sii yiri
Wasaaradda ayaa ugu danbeyn waxay waradda ayy soo saaty wargein ug dirtay wasaarada amniga ee onfur Galbeed. In sabaha aan kor ku xusnay aanu Muqtar rovow uga qyeb galin Karin doorahsad laguw ado in ay dhacdo bisha November